Noocyada Kala Doogga Gooya ee Kala Duwan - Ellicott Dredges
Jarjarrada Kala Duwan
Waa maxay Jaridda Dredge?
Mashiin-gooyuhu wuxuu loola jeedaa nooca madaxa qodista sida goynta dambiisha ama baaldiga baaldiga hareeraha hawo-biyoodka. Mashiinka wax lagu duubo wuxuu qaataa waxyaalaha la nuugo oo waxaa loo isticmaalaa jarida ama ka xanaaqa waxyaabaha la qodayo.
Jarjartuhu waxay leeyihiin laba hawlood oo aasaasi ah:
Xarkaha gogosha gashadu waxay ku kala duwan yihiin qaabka, cabirka, goynta goynta, xagal, iyo habka isku xirnaanta.
Xarkaha gooyaa dhaqameedku waxay gaarayaan dhamaadka taaj kasta oo gadaal u jeeda gudaha iyo dhanka wadida baabuurta ee taageerada. Jarista dambiilku waxaa loogu talagalay in lagu sawiro agab-qulqulka qulqulka iyadoo laga ilaalinayo weelka nuugista inay ku xiraan waxyaabaha waaweyn.
Kuwa gogosha gashanaya waxay ku shaqeeyaan shaqooyin badan oo kala duwan. Baaxadda gogoyuhu wuxuu go’aamiyaa ama u qiyaasay bamka tuubada si loo siiyo xaddiga ugu badan ee dareeraha adag ee nidaamka bamka.
Taxanaha Ellicott 370 iyo 670 Dabaqooyinka Dabaqyada ayaa sida caadiga ah lagu rakibay 31.5 inji (800 mm) iyo 43-inji (1,090 mm) gogol ahaan siday u kala horreeyaan, halka taxanaha 1270 Dragon® uu ku rakiban yahay 54 inji (1,370 mm) . Dhexroor cabirka goynta wuxuu leeyahay xawaare goon gooye gaar ah iyo xoog goynta.
Xarkaha gogosha ayaa sido kale lagu qalabeysan karaa ilkaha dib-loo cusboonaysiin karo oo ku dhegan xarkaha gogosha dambiisha loogu talagalay codsiyada adag. Markay ilkuhu xirtaan, si fudud ayaa loo beddeli karaa.
Qalabka ugu horeeya ee naqshadeynta loogu talagalay ee leh shatiga Ellicott® ee bokiska bulukeeti waxaa lagu soo rogay warshadaha burburay sanadkii 1976. Baastoorka ayaa sida caadiga ah loo iibiyaa qayb gaar ah oo loo diyaarshay waxaana badanaa loo isticmaalaa codsiyada macdanta. Dambiilo adag oo adag ayaa ka kooban giraanno wareegaya oo baaldiyo aan fiicnayn oo ku xidhan xarka dambe. Qashinku wuxuu ku dhacayaa qolka hoose ee giraangiraha oo ah qaab dabacsan, wuxuu si toos ah ugu dhaqaaqaa matoorka qashin-qubka iyadoo loo maro afka nuugaya kaas oo waliba ku yaal gudaha giraangiraha. Dambiilaashku waa aalad qoditaan aad u fiican oo loogu talagalay alaabada adag, waxay si qumman u qoddaa labada dhinacba oo ay ku socdaan, waxay maarayn karaan macdanaha culus, waxayna ku qodayaan xitaa waddo qoto dheer.
Dambiilaha baaldileyda ah wuxuu xoogga saaraa inteeda badan faraskiisa fardooleyda (HP) dhererka gaagaaban ee baaldi kasta, wuxuu u oggolaanayaa giraangiraha baaldiyo inuu haysto illaa saddex jeer awoodda goynta gogol dhaqameedyada. Joogteynta mashiinka gogosha ku duuban waxay noqon kartaa mid aad qaali u ah waxayna u baahan tahay ku shaqeynta gaari carrabka lagu riixey, oo ka qaalisan habka socodka dhaqameed ee socodka. Hase yeeshe, codsiyada qaarkood, qiimaha waxaa diidan tayada wax-ku-oolka ah ee biyo-u-haynta.
Ellicott Dredges, LLC waxay bixisaa diiraneyaal iyo jarjartuleyd baaldiyo ah qaabab iyo cabbiro kala duwan. Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jarista dhirta, fadlan nagala soo xiriir at sales@dredge.com ama dhammaystirkeena Foomka mashruuca, qofna goor dhow ayuu kula soo xiriiri doonaa.